Golaha Guurtida oo Ansixiyay In Murashaxiinta Deegaanka Loo sameeyo Lambaro astaamo u noqonaya + SAWIRO | FooreNews
Home wararka Golaha Guurtida oo Ansixiyay In Murashaxiinta Deegaanka Loo sameeyo Lambaro astaamo u noqonaya + SAWIRO
Golaha Guurtida oo Ansixiyay In Murashaxiinta Deegaanka Loo sameeyo Lambaro astaamo u noqonaya + SAWIRO
Hargeysa (Foorenews)- Mudaneyaasha Golaha Guurtida Somaliland ayaa fadhigoodii maanta ansixiyay ansixiyay lifaaqa shanaad ee xeerka doorashooyinka Goleyaasha deegaanka iyo Madaxtooyadda xeer NO:20.
Fadhigii maanta ee Golaha Guurtida oo uu guddoominayay Guddoomiyaha Golahaas Md.Saleebaan Maxamuud Aadan, waxa Mudaneyaasha Golaha Guurtidu ay ansixiyeen in wax ka bedel kooban oo lagu sameeyay xeerkan doorashooyinka, waxaanay u ansixiyeen qaabkii ay Komishanka doorashooyinku hore u dalbadeen oo ah in Murashaxiinta u tartamaysa Goleyaasha deegaanka loo sameeyo Numbero ay astaan u noqon doona.
Xeerka Doorashooyinka ayaa hore u jidaynayay in Murashaxiinta doorashada deegaanku yeeshaan astaamo u gaar ah oo murashax waliba ku galo doorashada.
Guddoomiyaha Golaha Guurtida Md. Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa cod bixintii xeerkan ka hor hadal kooban oo uu u jeediyay Mudaneyaasha waxa uu ka xog-waramay xeerka doorashooyinka oo uu tilmaamay inay hore wax ka bedel iyo kaabis ugu sameeyeen illaa shan jeer oo hore.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in xeerkan baahi weyn loo qabo xiligan oo loo diyaar-garoobayo doorashadii Goleyaasha deegaanka, waxaanu Xildhibaanada ka dalbaday inay u ansixiyaan xeerkan sida ay komishanku ka soo dalbadeen.
Waxa madasha fadhigan ka soo xaadiray 58 Xildhibaan, waxa ogolaaday in murashaxiinta doorashada deegaanka loo sameeyo numbero 50 Mudane, waxa diiday 6 Xildhibaan, 1 Mudane ayaa ka aamusay. Guddoomiyuhuna muu codayn, sidaasi ayuu ku ansaxay lifaaqa shanaad ee xeerka doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo madaxtooyaddu.
Golaha Wakiiladda ayaa iyagu xeerkan sidan oo kale u ansixiyay todobaadkii hore, ka dib markii Komishanku ay sheegeen inaanay suurto-gal ahayn inay doorashada goleyaasha deegaanku dalka ka qabsoonto, haddii aan la bedelin qodobka ku saabsan in astaamaha murashaxiinta doorashada deegaanka oo aan lagu bedelin lambaro.
Previous Post"Haddii Ciiddamada dib loo soo qaadayo, kuwa Laascaanood iyo Ceerigaabo anaga-na hala lanaga soo qaado.." Xildhibaan Indho-indho Next PostSaleebaan Xaglo Toosiye oo ku dooday inuu dhammaaday dagaalkii deegaamada Sool iyo Buuhoodle